Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Qatar Airways na RwandAir na -ekwupụta nkwekọrịta njikọta
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Rwanda • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Afrịka bụ ahịa dị oke mkpa maka Qatar Airways na mmekorita ọhụrụ a ga -enyere aka kwado mgbake nke njem ụgbọ elu mba ofesi ma nye njikọ na -enweghị atụ na site n'ọtụtụ ebe ọhụrụ Africa.
Mmekọrịta ga -akwalite netwọkụ ụwa nke Qatar Airways.
Nnweta Qatar Airways na -aga ebe ndị Africa ga -abawanye.
Nkwekọrịta a ga -ejikọ uru nke mmemme iguzosi ike n'ihe nke Qatar Airways na RwandAir.
Qatar Airways ndị njem ga -enwe ike inyocha ọbụna Afrịka ọzọ na -eso mmekorita ọhụrụ ya na onye na -ebu ọkọlọtọ Rwanda, RwandAir site na ọdụ ha na Doha na Kigali.
Dị ka akụkụ nke mmekorita atụmatụ, nkwekọrịta dị n'etiti ga -enye ndị ahịa ohere ịbanye na netwọk nke ụgbọ elu abụọ, na -enye ahụmịhe njem na -enweghị nsogbu yana ịkwalite ọrụ ndị ahịa gụnyere na mmemme mgbasa ozi ugboro ugboro.
Ndị ahịa nwere ike họrọ ma họrọ site na ihe karịrị ebe 160 na netwọkụ nke ụgbọ elu abụọ, nke ejikọtara nke ọma site na ebe obibi ha nke Doha na Kigali.
Mmekọrịta ọhụrụ a na -abịa n'ihu ọkwa ọkwa mmekọ mmekọ iguzosi ike n'ihe na nso nso a RwandAir Maịl nrọ na Qatar Airways Ndị otu iguzosi ike n'ihe klọb Privilege, nweta ebe ọ bụla na -enwe ohere 'irite ma kpọọ ọkụ' n'ofe netwọkụ mmekọrịta ha.
Onye isi ala Mr. Akbar Al-Baker, onye isi ndị ọrụ Qatar Airways Group kwuru, sị: “Mmekọrịta a na-eme ka mkpebi anyị dị ka inye ndị njem ohere kachasị ebe ha na-aga, ebe anyị na-enye ahụmịhe njem dị oke mma, nke bụ ebumnuche nke Qatar Airways na RwandAir.
"Afrịka bụ ahịa dị anyị mkpa nke ukwuu, mmekọrịta ọhụrụ a ga -enye aka kwado mgbake nke njem ụgbọ elu mba ofesi ma nye njikọ na -enweghị atụ na site n'ọtụtụ ebe ọhụrụ Africa."
Yvonne Makolo, onye isi ụlọ ọrụ RwandAir kwuru, sị: “Obi dị anyị ezigbo ụtọ na anyị ga -emepe ndị ahịa anyị ọtụtụ ụwa site na nkwekọrịta njikọ ọhụrụ na Qatar Airways.